छिट्टै आईहाल्छु है भनी उ,पचार गर्न बुटवल गएका बाबु अब कहील्यै फर्कीदैनन बाटो हेर्दै बस्छन दुई छोरा दु,खको कुरा …हेर्नुहोस!
दिपक न्यौपाने। सैनामैना । चैत ६ गते बुवा विदेशबाट घर आउँदा भुईमा खुट्टा थिएन यी दुई भाईको । बुवा बाबुराम थापाले दुवईबाट चकलेट र नयाँ कपडा बोकेर आएका थिए । दाजु कुशल र भाई रिजन बाबु आए दिन अबेरसम्म पनि मुखले चकलेट चपाईरहे भने नयाँ कपडा पटक पटक सुम्सुम्याई रहे ।
तर, त्यो खुसी गत आईतबार एकैपटक चुँडीयो । छिट्टै आईहाल्छु है भनेर आफूलाई उ,पचार गर्न भनि बुटवल गएका बाबु फर्केनन् । ज्व,रो आएर उ,पचार गर्न गएका बाबुको बुटवलको को,रोना विषेश अस्थाई अ,स्पतालमा नि,धन भयो ।
आईतबार दिउँसो आमा अत्तालिदैं अ,स्पताल जाँदा रुनमात्रै सकेका थिएनन् कुशल र रिजन । साँझ आमा रीता थापा रुदैं डेरा फर्कदाँ उनिहरुले बुझीसकेका थिए–‘अब हामी टुहुरा भयौं ।’
कुशल ८ बर्षका भए । रिजन त्यो भन्दा १८ महिनाले मात्रै कान्छा हुन् । बाबुको मृ,त्यु भएपछि घरमा श,व अझैं आईपुगेको छैन तर, यीनीहरुको भविष्य कता धकेलीने हो भन्ने अनिश्चीत भईसकेको छ ।
घरका मे,रुदण्ड बाबुरामको को,रोना आं,कामा अ,स्पतालमा राखिएपछि त्यहीँ मृ,त्यु भएको हो । अ,स्पतालको ला,परबाहीले श्रीमानको नि,धन भएको भन्दै श्रीमती रीताले छोराहरुलाइ कोखैमा राखी आजसम्म पनी श: ब उठाउन मानेकी छैनन् ।
पाल्पाको रिब्दिकोट कुशुमखोलाबाट १ बर्षअगाडी मुर्गीयाको सिसैडाडामा डेरा गरी छोराहरुलाई नै पढाउने भनेर झरेका थिए थापा दम्पती । मासीक ३ हजार भाडामा तिर्ने गरी एउटा किचन र रुम लिएर बसेकी रीताका दुइ छोरा नजिकैको प्रभात ईग्लिलिश बोर्डीङ स्कुलमा पढ्छन् ।
कक्षा १ पढ्ने कुशल र यूकेजीमा पढ्ने निरजको विद्यालयको फिस नतिरेकै एक बर्ष भईसकेको थियो । त्यसैमाथि परेको अर्को ब,ज्रपातले बच्चाहरुको भविष्यलाई पुरै अ,निश्चित बनाइदिएको छ ।
‘यीनीहरुलाई कसले पढाउछ अव । मलाई एक्लै पारेर गईहाले । त्यो पनि कुनै रो,ग नै लागेको रहेनछ । अरुले ला,पहरवाही गरे दुख मैले पाउनुपर्ने ।’ निकै मलिन स्वरमा दैनिक लुम्बिनीसँग रीताले बताइन् ।
पती विदेशमा भएपनि उनले घर खर्च चलाउन स्थानीय पाउरोटी फयाक्टीमा काम गर्थिन् । दुई क खान र बच्चाहरुलाई बोर्डीङ स्कुलमा पढाउदा नै उनिहरुलाई ह,म्मे ह,म्मे परेको थियो । यसैमाथि केही जग्गा किन्दा लागेको ३ लाख रुपैंया क्रृणभार पनि अव उनकै थाप्लोमा आईपुगेको छ ।
रीताले गला अ,वरुद्ध पार्दै भनिन्,‘अर्को सालदेखि नै यीनीहरुलाई विद्यालय पठाउने उपाय देखेकि छैन अव । यो कस्तो समय हो मेरो ।’
उनले थपिन्,‘जुन साहारा थियो त्यो नै चुडाईदिए । अब कसको शरणमा जाउँ ?
निजी एअरलाइन्सलाई दशैँ व्यापार भ्याइ’नभ्याइ, निगमका जहाज ‘घाम ताप्दै’
अब राजतन्त्रको आवश्यकता छैनः डा.सुन्दरमणि दिक्षित